Depiote miisa 73 : Hanohana kandida tokana
Miha mazava ny lalan-kalehan’ireo solombavambahoaka miisa 73 izay tsy mitsahatra ny mamboly korontana eto amin’ny firenena ankehitriny. Ny hanolorana kandida tokana amin’ny fifidianana ny tanjona amin’izany raha ny nambaran’ny sasany tamin’izy ireo. Tetika izay efa …Tohiny
Andraharo : Tra-tehaka ilay mpisoloky mpamerin-keloka
Noraisim-potsiny teo am-panatanterahana ny asa ratsiny teny amin’ny orinasa iray etsy Andraharo ny vehivavy mpamerin-keloka efa ikoizana amin’ny asa fisolokiana. Araka ny voalazan’ny teo anivon’ny polisim-pirenena, dia tamin’ny sabotsy 05 mey lasa teo tokony ho …Tohiny
Napetraka tao amin’ny Lycée « Notre Dame » ao Mahajanga ny bibliothèque nomerika, izay tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena. Ahitana fitaovana moderina ity toerana ity, ka efa misy ordinatera misy internet sy imprimante. “ Hitondra …Tohiny
Miha mahazo vahana hatrany ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina mahery vaika eto Madagasikara. Efa fantatra avokoa ny atidoha amin’ny fampidirana azy ireny eto an-toerana, ary isan’izany ireo teratany tanzanianina. Vao tamin’ny 25 aprily lasa teo no nahitana …Tohiny
Fjkm Androva Vaovao Famonjena : Nahazo vola 4 tapitrisa avy amin’ny Filoha mivady